Clearbit: Mampiasa faharanitan-tsaina amin'ny fotoana tena izy mba hanamboarana sy hanatsara ny tranokalanao B2B | Martech Zone
Ireo mpivarotra nomerika dia mifantoka betsaka amin'ny heriny amin'ny fampidinana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalany. Mampiasa vola amin'ny dokam-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy sy media hafa izy ireo, mamorona votoaty mahasoa hitarihana fitarihana miditra, ary manatsara ny tranokalany mba hahatonga azy ho ambony kokoa amin'ny fikarohana Google. Na izany aza, maro no tsy mahatsapa fa, na dia eo aza ny ezaka rehetra ataony, dia tsy mampiasa loatra ny tranokalany izy ireo.
Mazava ho azy, ny fampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala dia ampahany manan-danja amin'ny paikady ara-barotra amin'ny ankapobeny, saingy tsy midika izany raha tsy mampahafantatra ny tenany ny mpitsidika tranonkala (ohatra, amin'ny famenoana endrika). Raha ny marina, matetika ianao dia manana fotsiny 10 segondra mba hisarihana ny sain'ny mpitsidika alohan'ny handaozany ny tranokalanao. Raha mahazo mpitsidika tranokala be dia be ianao nefa diso fanantenana amin'ny fahavitan'izy ireo miova ho fitarihana, fotoana izao hanaovana ireo segondra vitsy voalohany ho tena isaina - ary eto no tena zava-dehibe ny personalization.
Ny fiezahana hiresaka amin'ny rehetra dia midika fa manalefaka ny herin'ny hafatrao amin'ireo mpihaino kendrena anao. Ny fomba fiasa ara-barotra manokana, etsy ankilany, dia mamorona traikefa tsara kokoa izay mitondra mankany amin'ny fiovam-po haingana kokoa sy fifandraisana matanjaka kokoa. Personalization mampitombo ny ianarantsika avy ny hafatrao - ary ny maha-zava-dehibe azy no mitondra andraikitra.
Ankehitriny, mety mieritreritra ny tenanao ianao, Ahoana no ahafahantsika mandefa hafatra manokana amin'ny orinasa lasibatra 100, 1000, na 10,000 mihitsy aza? Mora kokoa noho ny eritreretinao izany.
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny famadihana fifamoivoizana amin'ny Internet bebe kokoa
Alohan'ny ahafahanao mampihatra ny varotra manokana dia mila mandray fanapahan-kevitra vitsivitsy momba izay hokendrenao aloha ianao. Tsy misy fomba ahafahana manatsara kokoa ny olona tsirairay na ny variana mpihaino rehetra. Mifantoha amin'ny iray na roa amin'ireo fizarana ambony indrindra anananao, ampahafantarin'ny mombamomba ny mpanjifanao sy ny maha-marika anao, ary inona no mampiavaka azy ireo amin'ny be sy ny maro.
Ny toetran'ny firmographic mahazatra izay manampy amin'ny fanavahana ireo fizarana kendrena ireo dia ahitana:
Indostria (oh: varotra, haino aman-jery, teknolojia)
Haben'ny orinasa (oh: orinasa, SMB, fanombohana)
Karazana orinasa (oh: e-varotra, B2B, renivola venture)
Toerana (oh: Etazonia Avaratra-Atsinanana, EMEA, Singapour)
Azonao atao koa ny mampiasa ny angona demografika (toy ny lohatenin'ny asa) sy ny angona momba ny fitondran-tena (toy ny fijerena pejy, ny fampidinana votoaty, ny dian'ny mpampiasa, ary ny fifaneraserana amin'ny marika) mba hizarana bebe kokoa ireo mpampiasa fantatra amin'ny alàlan'ny finiavana. Ny fahatakarana tsara kokoa ny mpitsidika anao dia ahafahanao manomboka mamolavola ny diany ary mampifanaraka ny fiarahabanao, ny fitetezana ary ny tolotrao mifanaraka amin'izany.
Azo antoka fa efa namorona pejin-pejy manokana ho an'ny fizarana tsirairay ianao, saingy amin'ny fampisehoana hafatra mifanaraka amin'izany, antso ho amin'ny hetsika, sarin'ny maherifo, porofo ara-tsosialy, chat, ary singa hafa, dia azonao atao ny mampita ireo soso-kevitra manan-danja amin'ny tranokalanao manontolo.
Ary miaraka amin'ny fitaovana faharanitan-tsaina mivadika-IP toy ny ClearbitNy Reveal Intelligence Platform, dia manomboka amin'ny dingana rehetra ianao.
Clearbit dia sehatra faharanitan-tsaina ara-barotra B2B izay ahafahan'ny ekipan'ny varotra sy ny fidiram-bola hampihatra angon-drakitra manankarena sy amin'ny fotoana tena izy manerana ny fantson-dry zareo nomerika manontolo.
Iray amin'ireo fahaiza-manaon'ny sehatra fototra an'i Clearbit ny Reveal – rafitra fitadiavana IP mivadika hamantatra ho azy ny toerana iasan'ny mpitsidika tranonkala iray, ary hidirana amin'ireo toetra manan-danja 100 momba an'io orinasa io avy amin'ny sehatra fitsikilovana tena misy an'i Clearbit. Izany dia manome angon-drakitra manankarena avy hatrany amin'ny fanamafisam-pahefana - toy ny anaran'ny orinasa, ny habeny, ny toerana misy azy, ny indostria, ny teknolojia ampiasaina, sy ny maro hafa. Na dia alohan'ny hanomezan'izy ireo ny adiresiny imailaka aza dia azonao fantarina hoe iza no ifampiraharahanao — na kaonty lasibatra izy ireo na tafiditra ao anatin'ny sehatra iray manokana — ary koa ny pejy jereny. Miaraka amin'ny fampidirana Slack sy mailaka, Clearbit dia afaka mampandre ny ekipan'ny varotra sy ny fahombiazana raha vao tonga ao amin'ny tranokalanao ireo vinavina sy kaonty manan-danja.
Miaraka amin'ny Clearbit, azonao atao:
Hanova mpitsidika bebe kokoa ho fantsona: Fantaro ireo mpitsidika tranonkala mifanentana tsara, mamorona traikefa manokana, manafohy endrika, ary mahazo tombony betsaka amin'ny fifamoivoizanao sarobidy.
Asehoy ireo mpitsidika tranokala tsy fantatra anaranao: Ampifandraiso ny angon-drakitra momba ny kaonty, ny fifandraisana ary ny IP mba hahatakarana ny fifamoivoizanao sy hamantarana ny ho avy.
Esory ny friction ary ampitomboy ny hafainganam-pandehan'ny fitarihana. Hafohy ny endrika, ataovy manokana ny traikefa, ary ampitandremana ny ekipan'ny varotrao amin'ny fotoana tena izy rehefa mampiseho fikasana ny kaonty tena mety.
Tsy toy ny vahaolana hafa izay manome fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny varotra ihany, Clearbit dia manome toetra 100+ ho an'ny orinasa mihoatra ny 44M. Ary, tsy sahala amin'ny vahaolana fikatonan'ny suite "all-in-one", Clearbit's API-first platform dia manamora ny fampifangaroana ny angona Clearbit amin'ny rafitra misy anao ary mametraka azy io hiasa manerana ny stack MarTech manontolo.
Clearbit ihany koa dia manolotra dikan-teny maimaim-poana amin'ireo fahaiza-manao ireo miaraka amin'ny Tatitry ny mpitsidika isan-kerinandro, izay mamaritra ireo orinasa mitsidika tranokala iray sy ireo pejy notsidihiny. Ny tatitra isan-kerinandro dia alefa amin'ny alàlan'ny mailaka isaky ny zoma ary mamela anao handrava ny mpitsidika anao amin'ny isan'ny fitsidihana, fantsona fahazoana, ary ny toetran'ny orinasa toy ny indostria, ny haben'ny mpiasa, ny vola miditra, ny teknolojia ary ny maro hafa. Ny hany tsy maintsy ataonao dia ny mametraka script maivana amin'ny tranokalanao, izay manindrona pixel (rakitra GIF) isaky ny pejy. Avy eo, na oviana na oviana ny mpitsidika iray mampiditra pejy, Clearbit dia mirakitra ny adiresy IP ary mampifanaraka izany amin'ny orinasa iray mba hahafahanao mahatakatra sy manova ny fanananao sarobidy indrindra - ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao.
Andramo maimaim-poana ny tatitra isan-kerinandro momba ny mpitsidika an'i Clearbit
Fampitomboana ny fahombiazan'ny tranokala B2B miaraka amin'ny Clearbit
Ny toerana tsara hanombohana fanandramana amin'ny fanamboarana tranokala dia ny lohateninao, ny ohatra ho an'ny mpanjifa ary ny CTA. Ohatra, DocSend, orinasa rindrambaiko ifampizarana antontan-taratasy, dia nanao izany ho an'ny mpihaino kendreny — fanombohana, kapitalista mpandraharaha ary orinasa orinasa. Rehefa tonga tao amin'ny tranokalan'ny DocSend ny mpihaino tsirairay dia nahazo ny hafatry ny maherifony manokana, ny fanambaràn'ny tombam-bidiny ary ny fizarana porofo ara-tsosialy miaraka amin'ny sarin'ny orinasa mifandraika amin'izany. Ny fizarana porofo ara-tsosialy manokana dia nitondra fitomboana 260% amin'ny fisamborana firaka fotsiny.
Vantany vao nataonao manokana ny pejinao web ary naharesy lahatra ny mpitsidika hifikitra, dia mbola misy ny resaka mamadika ny fifamoivoizana ho fitarihana. Ny endrika misy saha be loatra, ohatra, dia mety ho teboka miraikitra lehibe, mahatonga ny mpividy himenomenona sy hanafaingana azy ireo - na handoa onitra tanteraka.
Izany no olana izay Rivotra mihatra, sehatra webinar sy video fihaonana, niantso an'i Clearbit hanampy amin'ny famahana. Raha ny momba ny fisoratana anarana amin'ny fitsapana maimaim-poana dia nahita taham-pialana 60% izy ireo. Midika izany fa latsaky ny antsasaky ny mpitsidika tranonkala izay manindry bokotra “Andramo maimaim-poana” no nahavita ny fisoratana anarana ary niditra tao amin'ny radar-n'ny ekipan'ny varotra Livestorm.
Ity taratasy fisoratana anarana ity dia natao hanampiana hamantatra ireo fitarihana mampanantena, saingy be dia be ny saha tokony hofenoina (anarana, anarana farany, mailaka, anaram-piasana, anaran'ny orinasa, indostria ary haben'ny orinasa) ary nampiadana ny olona izany.
Naniry ny hanafohezany ny taratasy fisoratana anarana ny ekipa nefa tsy very angon-drakitra fototra. Miaraka amin'ny Clearbit, izay mampiasa adiresy mailaka hikarohana ny mombamomba ny orinasan'ny mpitarika, Livestorm dia nanapaka saha telo tamin'ny endrika manontolo (lohatenin'ny asa, indostria ary haben'ny orinasa) ary nameno ho azy ireo saha telo ambiny (anarana, anarana, ary orinasa). anarana) raha vantany vao nitendry ny adiresy mailaka momba ny orinasany ny mpitarika. Izany dia namela saha iray fotsiny ho an'ny fidirana amin'ny tanana amin'ny endrika, manatsara ny tahan'ny fahavitan'ny 40% hatramin'ny 50% ary manampy fitarihana fanampiny 150 hatramin'ny 200 isam-bolana.
Ankoatra ny endrika, fomba iray hafa hanovana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala ho fitarihana dia amin'ny alàlan'ny traikefa chatbox mirindra kokoa. Ny chat an-tranonkala dia manome fomba am-pirahalahiana hifaneraserana amin'ireo mpitsidika tranokalanao ary hanolotra ny vaovao ilainy amin'ny fotoana tena izy.
Ny olana dia matetika ianao no tsy afaka milaza hoe iza amin'ireo olona rehetra manomboka resaka amin'ny chat ianao no tena sarobidy aminao. Fandaniam-potoana sy loharanon-karena – ary matetika lafo loatra – ny hanokana angovo mitovy amin'izany ho an'ny fitarihana izay tsy mifanaraka amin'ny mombamomba anao mpanjifa (ICP).
Ahoana anefa raha manana fomba hampifantoka ny loharano amin'ny chat mivantana amin'ny VIP-nao ianao? Avy eo ianao dia afaka manome azy ireo traikefa tena manokana nefa tsy mampiseho ny endri-javatra amin'ny chat amin'ny mpitsidika izay toa mbola tsy mahafeno fepetra.
Mora ny manao izany amin'ny alàlan'ny fampidirana Clearbit amin'ny fitaovana chat toa ny Drift, Intercom, ary Qualified mba hananganana chat izay mipoitra mifototra amin'ny angon'i Clearbit. Azonao atao ny mandefa mpitsidika mitovitovy amin'ny atiny ICP mifandraika kokoa, toy ny quiz, ebook CTA, na fangatahana demo. Ny tsara kokoa dia azonao atao ny mampiseho solontena tena izy ao amin'ny chat mba hanomezana serivisy manokana kokoa sy famantarana amin'ny mpitsidika fa miresaka amin'ny olona tena izy (fa tsy bot). Azonao atao koa ny mampifanaraka ny hafatrao hampiasa ny anaran'ny orinasa mitsidika sy ny fampahalalana hafa amin'ny alàlan'ny maodelin'ny fitaovan'ny chat sy ny angona Clearbit.
Mba hanomezana traikefa tsara indrindra ho an'ny mpitsidika ny tranokalany, sehatra database MongoDB nampihatra ireo lalan'ny chat samy hafa: ny ho avy ambany isa, ny avo lenta, ny fanohanan'ny mpanjifa, ary ireo liana amin'ny fianarana momba ny vokatra maimaim-poana, ny fiaraha-monina, na ny MongoDB University.
Amin'ny fanavahana ny traikefa amin'ny chat ho an'ny fizarana tsirairay, ny MongoDB dia nahita resadresaka 3x bebe kokoa tamin'ny ekipan'ny varotra ary nanala ny fotoana hamakivakiana ny andro ka hatramin'ny segondra. Raha ny endrika fifandraisana ao amin'ny tranokalan'ny MongoDB no nitarika voalohany amin'ny resaka varotra, ny chat dia nanomboka nipoitra ho loharanon'ny mpanangana tanana.
Fampandrenesana varotra amin'ny fotoana tena izy
Inona anefa no mitranga rehefa mameno endrika na mifandray aminao amin'ny chat ny mpitsidika tranonkala? Na dia ny fahatarana kely indrindra amin'ny famaliana aza dia mety handany fivoriana sy fifanarahana vaovao.
Alohan'ny hampiasana Clearbit, Radar, orinasa iray izay manome vahaolana amin'ny toerana misy azy ho an'ny mpamorona, miompana amin'ny fiainana manokana, dia niverina tamin'ny fitarihana tao anatin'ny adiny iray taorian'ny fandefasana ny endrika – ary noheverina ho tsara izany! Avy eo, nanomboka nampiasa an'i Clearbit i Radar mba hampandrenesina ireo solombavambahoaka rehefa nisy kaonty kendrena tao amin'ny tranokalany — rehefa ambony indrindra ny fahalianana sy ny fikasana hividianana — nampidina ny fotoanan'ny hafainganam-pandehany ho ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny kaonty iray mamely ny tranokalany.
Mba hanaovana izany, nanapa-kevitra izy ireo hoe iza amin'ireo mpitsidika no hamoaka fampandrenesana, mifototra amin'ny fijerena pejy, Salesforce, ary angona firmographic.
Avy eo, ny fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny Slack (na amin'ny endrika hafa toy ny digest mailaka) dia mampiseho fampahalalana momba ny orinasa, ny pejy misy azy ireo ary ny tantaran'ny fijerin'ny pejiny vao haingana.
Nametraka fanairana mihitsy aza ny Radar tamin'ny fantsona ho an'ny daholobe – raha nanonona ny solombavambahoaka mety hampandre azy ireo – mba hahitan'ny rehetra ao amin'ny orinasa ny zava-mitranga, ny fanehoan-kevitra ary ny fandraisana anjara. Ao anatin'ireo emojis mankalaza, ny fampandrenesana dia manome teboka fiaraha-miasa vaovao ho an'ny rehetra - fa tsy ny solontena voatendry ihany - mba hanampy amin'ny fanovana an'io mpanjifa io. Miaraka amin'ny fahafahana mijery kaonty ao amin'ny tranokalan'izy ireo miaraka amin'i Clearbit, manatona amin'ny fotoana mety indrindra ary mamandrika fivoriana, Radar dia namokatra $1 tapitrisa fanampiny amin'ny fantsona.
Mianara bebe kokoa momba ny Clearbit
Tags: b2bb2b votoaty mavitrikab2b fiovam-pob2b marketing intelligencehaben'ny orinasahiresakatraikefa amin'ny chatpersonalization amin'ny chatmazavaindostrian'ny orinasatoerana misy ny orinasaAnaran'ny orinasaniova fo bebe kokoatahirin-kevitra demografikadocsendvotoaty mavitrikamahery fo mavitrikaeBookfampidirana mailakafirmagraphicfirmagraphicsfisamborana endrikaip intelligencemitarika fiovam-poRivotra mihatratoeranaMongoDBpageviewpixel gifquizfanairana amin'ny fotoana tena izyPersonalization amin'ny fotoana tena izymanambara faharanitan-tsainareverse ip lookupmamadika ip-intelligencemamadika-ipfanairana momba ny varotrafantsom-pivarotanasalesforcefahafaha-miasa amin'ny varotrasalesforce fahafahanamanafohy endrikaendrika fisoratana anaranamialà sasatraintegration malakyteknolojia ampiasainatriggerfampandrenesana triggerkarazana raharaham-barotrapersonalization ny tranokalatatitra isan-kerinandro
Nick Wentz dia ClearbitNy VP of Marketing. Amin'ity andraikitra ity dia manampy an'i Clearbit izy hanatratra ireo orinasa B2B izay miezaka hahatakatra bebe kokoa ny mpanjifany sy hanatsara ny fantson-dry zareo nomerika. Manana traikefa ara-barotra nandritra ny folo taona mahery izy, miaraka amin'ny fahaiza-manao lalina amin'ny famokarana fangatahana sy ny varotra fitomboana.